Ixesha lokuFunda: 8 imizuzu Enoba olindwendwelayo Amsterdam okokuqala okanye abuyele ukuhlola imisele langa kodwa kwakhona, Uya kufuna ukwazi malunga nezinto ezizodwa onokuzenza eAmsterdam! Ukuba ukulungele ukukhangela iindawo ezingaphaya kweDamrak avenue eAmsterdam, olu luhlu…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Ukubhiyozela uSuku loKumkani eNetherlands ukuze kulunge iqela ubhedu Holland. on 27 UTshazimpuzi, babhiyozela lokuzalwa uKumkani Willem-Alexander kunye nomculo, amaqela street, iimarike izenze, neempahla fun. Ukumkani ngokwakhe uhamba kweli lizwe kunye nosapho lwakhe. Kubusuku obungaphambili…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Yinto kakhulu emva kwexesha ukucwangcisa lokubaleka in March, ngaphambi yePasika rush. Xa abantwana ukuba eholideyini, ngoku lixesha lokufumana ithuba lokutyelela iziqithi ezincinci ezincinci kunye nomntu omthandayo, qala uhambo lokuqala olukhulu losapho…